Ngabe uSepthemba 2020 ulungele amaPisces? - Isikhathi Sokuzalwa Komuntu
Ngabe uSepthemba 2020 ulungele amaPisces?
Imibuzo Nezimpendulo Ezinhle Kakhulu - I-Pisces Monthly Horoscope Septhemba
Septhemba Pisces 2020ukubikezela izinkanyezi kwezempilo kuhle impela. Ngeke kube khona noma yimaphi ama-hiccups amakhulu nezifo ezingamahlalakhona ezizobe zilawulwa. Ukwelashwa okujwayelekile kuzonakekela ezinye izinkinga zempilo. Impilo yengqondo ingagcinwa ngekuhleamasu okuphumula ngokuya nge-horoscope yakho yanyanga zonke.
Lesi yisona sizathu esenza iningi leLibra lazise okuluhlaza okwesibhakabhaka njengombala ozolile nonobumnene ukwazisa abantu abaningi ukuthi bangawuhlobanisa nokudangala umbala uvame ukumelela ukuzinza empilweni yomuntu Ungakhombisa ukuhlakanipha iLibra yenza umsebenzi omuhle wokukunikeza ulwazi lokukukhombisa ingabe okhululekile eqenjini lakho ingabe lokho kuyaphikisana nalokho i-horoscope yakho ekushoyo ngawe? Isigaba sokuphawula bese uqala ingxoxo nomphakathi wethu wezilwane iScorpio Okthoba 23rd kuya kuNovemba 21 ama-Scorpios ngokuvamile anesibindi azikho izinto eziningi kakhulu azihluphayo, yingakho umbala obomvu ungabonakalisa uthando nentshisekelo esezingeni eliphakeme i-mini scorpion khombisa njalo ufezela uhlala efuna uthando, kungaba ngesimo sothando noma ubungane lolu hlobo lokuzingela lunengozi ethile ohlangothini bakho ofezela bazithola begxuma okwenza umbala obomvu ube mkhulu kakhulu kuwe ukubukeka kuphela okubomvu kuyingozi Njengesikhumbuzo, lo ngumthunzi ophelele womuntu ohlala emaphethelweni. Mashi 21 kuya ku-Ephreli 19, lapho wazi ukuthi ama-Aries y kungenzeka ukuthi uqaphele ukuthi banemiqondo evulekile impela bazimisele ukufeza inhloso yabo futhi kuyaqabukela bavumele noma yini ibakhathaze. Kungakho bethanda umbala osawolintshi wewolintshi ngokuvamile umele umdlandla, ukuzimisela nenjabulo, kepha imvamisa sihlangana kakhulu namathoni ewolintshi nelanga lasehlobo kusilethela injabulo engachazeki ngendlela engamela lokho okusebenzela ngalo, isikhathi lapho zifudumele Isimo sezulu singakhululeka futhi akusadingeki sikhathazeke ngokuxineka I-Virgo 23 Agasti kuya ku-22 Septhemba Lesi sibonakaliso esilawulwa yi-mercury ngaso sonke isikhathi siqondiswe enhlanganweni Uma impilo ingaphelela iVirgos ingaba nayo ngakho-ke igcina konke kusezingeni eliphakeme kakhulu I-White ivame ukubhekwa umbala obukwa ekupheleleni Ubona izihibe eziningi ezihlanzekile nezindlu zazo ezikulo mbala ngoba intombi isebenza kanzima futhi iqhutshelwa empumelelweni umbala omhlophe ungamela ukukhanyiselwa kwabo bahlala bekwazi lokho abanye abaningi abangekho ngakho-ke bayimpumelelo ceed move on Sagittarius November 22nd to December 21st A Sagittarius is one of the inte Sidinga abantu abaningi njengabo ezimpilweni zethu zansuku zonke ubuntu babo bukhanyisa i-ro om, okuyindida impela uma ucabanga ukuthi umbala wabo abawuthandayo onsomi ungabonakalisa kancane ngenkathi iSagittarius inamandla amakhulu futhi inamahlaya bavame ukubambelela ekuzindleni ngencazelo yempilo iyini inhloso yami kuleli dwala Kusho ukuthi kuza oku nsomi ngokudlala kungamela imfihlakalo okungaziwa umbuzo waphezulu wokuthi iyini indawo yethu ohlelweni olukhulu lwezinto uCapricorn Disemba 22 kuya kuDisemba 22 Januwari 19 lolu phawu lwenkanyezi olulawulwa yi-saturn lusebenza kanzima kakhulu ukuze baphumelele ngempumelelo ngokuzikhuza futhi I-control capricorn ikhathazeke kakhulu ngomsebenzi wabo kangangokuba bavame ukusolwa ngokusebenza kanzima kakhulu ukuthi kungani bathanda umnyama omnyama unezincazelo ezihlukile ngenkathi abanye bewusebenzisa bahlobanisa ukufa nobubi, abanye bakubona njengophawu lwe-m eight solid gth kanye ne-capricorn yegunya idonswe kumnyama ngokukhonjiswa kwayo kwamandla kanye nekhono lokufeza noma yini i-Aquarius Januwari 20 kuya kuFebhuwari 18 U-Aquarius imvamisa ungumuntu osegumbini onezinto eziningi ukubukwa okuthuthukayo, mhlawumbe hhayi okuthuthuka kakhulu, kepha bakwenza kuzwakale kakhulu kunabanye abekho ngisho nasekamelweni imizuzu eyi-10 ngaphambi kokuba baqale ukukhuluma ngezinkinga zomphakathi nezindlela zokusindisa iplanethi nokuthi unjani umbala we-aquarius buza ulwandle oluluhlaza linda ngempela oh yebo u-turquoise unomfanekiso owodwa osindayo oluluhlaza ngokuvamile umele ukuhlakanipha nokuvikelwa esimweni se-Aquarius kugcizelela ithemba lokuthi uma sibheka izinto ngokoqobo, izinto zingahle zihambe kahle uma singokoqobo, kuyilapho i-Aquarius ingahle ingalungi nayo yonke imibono yakhe, ngokuqinisekile banethemba elikhulu kakhulu yingakho abantu bekujabulela ukuba phakathi kukaLeo e Julayi 23 kuya ku-Agasti 22 Lesi esinye isibonakaliso esinethemba lesibonakaliso sezinkanyezi, uLeo obuswa yilanga imvamisa nguye ohlala ethembekile isimo noma ngabe kubonakala sengathi alikho ithemba lokuthi uLeo naye uyaphila ukujabulisa abantu ngalezi zimfanelo eziningi nokuningi okuheha abantu yingakho umbala ophuzi umbala wabo ophuzi uvame ukumela u-ha ubungqabavu, ubumnandi namandla kungachazwa kanjani kangcono namuhla ukuthi zizenzakalela ngokwemvelo futhi zifuna isikhathi esihle ophuzi futhi angabonisa uthando lwakho lwezinto abazithandayo, ngaphambi kokuba siqhubeke zama ukuthola umlingani onobuntu obufana nobakho bukela indatshana yethu ixoxa ngenhlanganisela yakho ephelele ngokuya ngophawu lwakho lwe-zodiac manje sibuyele ohlwini lwethu lwemibala oyithandayo ye-zodiac pisces febhuwari 19 kuya ku-mashi 20 kwabelwane nge-neptune nenhlanzi ye-jupiter abaziwa ngozwelo lwabo kwabanye abantu abangabazi ngokuphelele abanemfudumalo efanayo nabangane imvelo yabo emnene imelwa kahle ngopinki umbala opinki uvame ukugcizelela ubungani nobungane, kuyilapho zombili izinto zikhonjiswa ezinhlanzini.
Ikhwalithi enkulu eyabelana ngayo nepinki yipiscisis yokungeneka iyangeneka ngokweqile ngenxa yozwela abalubonisayo ukuthi abantu bakhululekile ukuza kubo ngezinkinga ozizwa ubazungezile. Ingabe unentshisekelo kwizimpawu zezinkanyezi? Konke ukufutheka kulezi zinsuku kusho ukuthi awukwazi ukukhuluma nomuntu ngaphandle kwabo bekhuluma ngophawu lwabo lwe-zodiac. Uphawu ngalunye lwezinkanyezi lunezici zalo. Ngisho nemibala oyithandayo.
Ubani othanda okuphuzi? Isiphi isibonakaliso esiluhlaza okwesibhakabhaka ngaphezulu? Kusho ukuthini okuluhlaza okotshani, onsundu nokuphinki? Linda umzuzwana, oluluhlaza? Yiluphi uphawu olwenziwayo? Sikhuluma ngazo zonke lezo nokuningi ...
Ama-Scorpios abathola beqa bodwa, okwenza umbala obomvu ube ngaphezulu kombala ofanele kubo. Ukubukeka nje okubomvu kukhumbuza ingozi. Lona umthunzi ophelele womuntu ohlala emaphethelweni.
Ama-freaks amaningi amahle apendule indlu yawo lo mbala. Njengoba iVirgo isebenza kanzima futhi iqhutshelwa empumelelweni, umbala omhlophe ungamela ukukhanyiselwa kwabo. Bayazi ukuthi abanye abaningi banjani, futhi baphumelela kanjalo.
Siqhubekela phambili ....
I-Sagittarius (Novemba 22nd kuya kuDisemba 21st) I-Sagittarius ngomunye wabantu abaheha kakhulu ozohlangana nabo. Sidinga abantu abaningi abanjengabo ezimpilweni zethu zansuku zonke. Ubuntu babo bukhanyisa igumbi, okuyinto exakayo lapho umuntu ekhumbula ukuthi umbala wakhe awuthandayo ububende.
Ngenxa yozwela abalubonisayo, abantu bayathanda ukuza kubo nezinkinga. Uzozizwa unokuthula uma useduze. ITaurus (Ephreli 20 kuya kuMeyi 20) Uma kukhona into eyodwa ongeke uyisole iTaurus ayithembekile.
Indawo lapho angakhululeka khona ezicathulweni zabo futhi angahambi kakhulu. Umdlavuza (ngoJuni 21 kuya kuJulayi 22) Umdlavuza uthanda ukubeka phambili. Kwesinye isikhathi benza ngokuhlukumeza kakhulu ukuvikela uhlangothi lwabo olubucayi kwabanye.
Ngabe u-2020 uzoba unyaka omuhle kumaPisces?
I-unyaka ka-2020 uzokwenzaubeunyaka omuhle wePiscesabomdabu. Wenakuthandabona ukudlidlizela okuningi kwezobuchwepheshe, ezempilo, usuku lwanamuhla lomsebenzi ojwayelekile nokuhamba. Wenakuthandalindela ukudlidlizela okuhle ngokwezimali nomsebenzi, wenakuthandalindela amathuba amaningi emsebenzini, okuthikuthandaukwandisa umsebenzi wakho wobuchwepheshe.1. 2020.
Ngenhlanhla, abanye bethu badalelwe izinto ezinkulu nezingcono ukuba babe yizinkanyezi kusukela osukwini lokuzalwa kwakho. Uphawu lwakho lwe-zodiac lungakutshela ukuthi uzoceba kanjani empilweni yakho.
Esihlokweni sanamuhla, sizokutshela ukuthi amathuba akho okuceba asuselwa kusibonakaliso sakho se-zodiac. Ngakho-ke noma ngabe uyini umaki wakho, bheka ekugcineni ukuze wazi ukuthi uzoceba kanjani. Ama-Aries: Ama-Aries ngusomabhizinisi we-zodiac ongawenza acebe ngokuzimisela ukulwa.
Ama-Aries angcono kakhulu lapho engaba umholi wento ethile, ngakho-ke imincintiswano, imincintiswano, nemincintiswano iyakhanga kubo. Kepha imvelo yama-Aries engacabangi futhi engenasineke ingakushiya unenkinga yokonga, ukutshalwa kwezimali kwesikhathi eside, nanoma yini eba yinto ejwayelekile. Ujwayele nokuba nomcabango wabazingeli bemvelo, okuyikho okwenza ube nemali eyehlukile, ekwenza ukwazi ukufuna okuhle nokuthengiselana.
Kukhona okubi, noma kunjalo. Imizamo yakho yokonga ingalimaza imali uma ingadala ukuthi usebenzise imali eningi kakhulu ngenxa yokonga okubonakalayo. Ukuthanda ukunethezeka nobukhazikhazi, usukulungele ukusebenza kanzima ukukhokhela ukunambitheka kwe-champagne yakho.
Iso elibukhali lokutshala imali kanye nobungozi bokuphikisana neTaurus kumbeka endleleni yokuba usozigidi kusukela esemncane. ITaurus ingaba usozigidi ojwayelekile kwamakhelwane uma esebenza - basebenzela ukuqoqa imali esikhundleni sokuyisebenzisela izinto. Ngaphandle kwenhloso yokuthengisa izimpahla zikanokusho, iTaurus kungenzeka ishiye izindlalifa nezigidi zamaRandi eziqonda umqondo wokuqedwa futhi zingenabo ubudlelwano nezinto zakho ozithandayo, kunezinto eziningi ezinhle ezizayo, kepha ngaphambi kokuba uqhubeke, don ungakhohlwa ukuhlola isiteshi sethu ukuthola ezinye ezinhle Bhalisela izindatshana ezinjengalezi bese ucindezela isithonjana sensimbi ukuze ungaphuthelwa izibuyekezo! IGemini: Yize ungenasithakazelo sokwenza imali, ezweni elibuswa imithombo yezokuxhumana, uku-element yakho lapho i-Influencers iyinketho ebonakalayo yomsebenzi.
Lolu hlobo lomsebenzi likuvumela ukuthi uzithokozise ngezinto eziningi ngasikhathi sinye. Uzothola i-niche bese uhlala kuyo kuze kube yilapho isithukuthezi sikuthumela ukuthi ubheke okuthile okuthakazelisa ngokwengeziwe. Ungakhubazeka ngephutha empumelelweni yezezimali esikhundleni sokuceba ngoba unaka kakhulu ukuqongelela amaqiniso nolwazi kunemali.
Umdlavuza: Umdlavuza ungusomabhizinisi wemvelo. Unekhono lokunikeza abantu abakudingayo nabakufisayo. Kepha ukuceba kuzohlala kuyinto encane enkalankala, isifiso sayo esikhulu ukwakha okuthile okuzobasiza banakekele abantu babo akuhlangene nokuceba, okungenzeka ukuthi kuyinto enhle njengoba ungakulungele yini edingekayo ukuze ukuceba.
Ukuze ube mkhulu, imvamisa kufanele uphume endaweni yakho yokunethezeka, ngoba lena ayi-no-no enkulu kuwe. Banokuthambekela kwemvelo kokunikela ngemali yezinto ezihlala njalo, ezizinzile ezifana nezindlu ezithengiswayo nezimali zomhlalaphansi. Eqinisweni, umdlavuza kungenzeka ube usozigidi ezingama-401,000 ngosuku olulodwa.
Leo: Izigidi zikaLeo zivame ukuza nodumo nokwethembeka komkhiqizo. Kepha ngenkathi uLeo ehehwa ukubenyezela negolide, ungabalwela ukuqongelela ingcebo. Yize ithalente nomoya womuntu uphumelele, uLeo uthola ingcebo yakhe ikakhulukazi ekunakekelweni akutholayo kanye namandla okuveza ukwethembeka kubalandeli bakhe nakubantu abathandayo kungasiza, ezweni lama-selfies, ekufuneni ukunakwa ifomu lobuciko ukudala ingcebo.
Ukuthonya nokuziphakamisa akukaze kube nenzuzo enkulu, futhi lokhu kuyindaba kaLeo. IVirgo: NjengeVirgo, kungenzeka ukuthi awunawo umkhuba wokuba ngusozigidi, kepha lokho akusho ukuthi awukwazi ukuceba. Banekhono kakhulu enkonzweni futhi imvamisa bathola injabulo ezintweni zokuzilibazisa eziba amatoho.
Kepha ngokujwayelekile, uVirgo ulwela ukupheleliswa, hhayi impumelelo yomhlaba, futhi kungenzeka abe usozigidi ngokusebenza nomuntu ongumuntu wokusebenza ngenkathi esebenza njengobuchopho. Lokho okuqoqwa yiVirgo kuze kube phakade kungenzeka. Lapho ukhuthazwa ukuqoqa imali eningi, ngisho nezigidi, kuyaqabukela ngokuzicebisa wena.
Banamathuba amaningi okusebenzisa imali ukwenza umhlaba ube indawo engcono. ILibra: ILibra ethanda okunethezeka isebenzisa imali ngokushesha njengoba ikufanele, okusho ukuthi mhlawumbe ngeke ibe usozigidi weqiniso ngokwabo. ILibra ibuye ithambekele ekupheni ngokweqile, okuvela esifiso sokuthandwa yiwo wonke umuntu.
Uvame ukuwabalekela amathuba afaka ubungozi obuthile futhi uthembe imizwa yakho ngoba wesaba ukuthi uzokwehlisa umuntu ungaze ucebe. Futhi esikhundleni sokucela usizo noma ukufuna amathiphu, ukholwa ngokuzenzakalela ukuthi akekho ongakukhomba endaweni efanele. Leyo micabango eyehlisayo ingaba nobuthi, iLibra, kepha kufanele uyikhiphe ekhanda ngaphambi kokuba uzame futhi.
Ukuceba akulula, kepha uma konke unemicabango engemihle ngeke kusebenze. IScorpio: Umphathi wezimali, uScorpio uyakwazi ukuthatha ingozi ebaliwe futhi ufunda ngisho nabantu abakude kakhulu njengencwadi. Uthando lwakho lwangempela lungamandla, hhayi imali, kepha uyawazisa impela amandla angathengwa yimali.
IScorpio sinamathuba amaningi kunezinye izimpawu eziningi ze-zodiac sokuba ngusozigidi, uma befuna ngempela nalapho iScorpio ifuna okuthile, bazokufa ngaphambi kokuba badele. IScorpio iyaqonda ukuthi hhayi nje ukuqoqa inkokhelo, kepha ukwenza imali ikusebenzele. Ukutshalwa kwezimali, ikakhulukazi imali ebolekiwe kanye nezinsimbi zezezimali, kuyathandeka ukuthola ingcebo emabhizinisini anenzuzo afihliwe futhi angcolile njengokulahlwa kukadoti nokuhlanzwa kwendawo yobugebengu.
I-Sagittarius: I-Sagittarius isethubeni elikhulu lokwenza umcebo wayo ekugugeni noma ngokuholwa ngumuntu osekhulile ngoba babona ubusha njengesikhathi sokutholwa nesipiliyoni. Eyaziwa njengesibonakaliso senhlanhla, ungathola umkhuba ngaphandle kwenhlanhla enkulu noma ngesikhathi esifanele. NjengoSagittarius, uhlala uyikho okudingayo futhi uqhubeke uzama izinto ezintsha.
Fakela izikimu ezisheshayo ukugwema umsebenzi ojwayelekile. Ungumbonisi obona izitayela ngaphambi kokuthi zipholile futhi akhiphe isihogo kuzo. Ukuthi uhlala isikhathi eside ngokwanele ukuze uzuze entshisekweni yakho kuyindaba ehlukile, kepha inhlanhla yemvelo ikusindisa ekugcineni.
ICapricorn: ICapricorn iyisibonakaliso sesibili okungenzeka sibe ngusozigidi futhi ibizoba ngeyokuqala ukube umhlaba ubungumphakathi ophumelelayo. I-CEO ezelwe edonsa kanzima kwezezimali akuyona inketho yeCapricorn ezimisele kahle efanelekile ukwakha umbuso ngokutshala imali nokwenza izinqumo ezihlakaniphile zezezimali. Kungathatha iminyaka ukwenza umehluko omkhulu, kepha uzothola okufunayo ungakugcobi ebusweni bomuntu.
Kodwa-ke, lokhu kungasho amahora amade uwedwa, ukungaqondakali, nokukhetha umsebenzi ngaphezu kobuhlobo ps. Ngaphandle kokuthi ukhubazeke ngokwesaba ukwehluleka, uzobe unqwabelanisa izigidi ngaso sonke isikhathi ukudala hhayi kuphela ukuphepha kepha futhi nefa lomndeni wakho. Kuyavunywa, izingane zakho zidinga ukuzenzela imali njengoba kungenzeka usebenzise imali yakho enkulu ezikhumbuzo ezinkulu ekufezeni kwakho lapho umdala futhi uphumelele.
I-Aquarius: Ubuchwepheshe besimanje sebenze izigidigidi nge-Aquarius engeyona eyezinto ezibonakalayo. Umsunguli phakathi kwalolo phawu lwe-Zodiac, u-Aquarius, uzoceba ngengozi, bese enikela ngakho konke noma athenge idolobha ukuze ozakwabo bahlale ngokuthula nangokuzwana ngaphandle kobuhlanga. Kungenzeka ukuthi awunantshisekelo ezinzuzweni zomhlaba noma ngabe uvela emalini.
Okuxakayo ngukuthi lokhu kuzinikela okuphelele ezintweni ezingezona ezasemhlabeni kukusiza ekutholeni amakhono namakhono okwenza abantu bakukhokhele imali eshisiwe. Uzokwamukela imali inqobo nje uma une-accountant osebenza ngempela ngezindaba zezezimali futhi unenkululeko yokuba ngumuntu wakho wokuqamba futhi othusayo. Ama-Pisces: Ngokuqinisekile uyisibonakaliso se-zodiac onentshisekelo emhlabeni wezinto ezibonakalayo, ukuncintisana kanye nebhizinisi.
Kepha futhi uyihhashi elimnyama eliqoqa buthule ngokuqongelela ingcebo ngokuba yilokho okudingeka ube yikho ukuthola abanye ukuthi bakunikeze imali. Ukumodela, ukulingisa, nokuzijabulisa, amathikithi angaba nenotho yezinhlanzi - noma yini kusuka kumlingisi we-soap opera kuya kosaziwayo be-pop. Ungahle ungabi nentshisekelo ngengcebo, kepha ingcebo empeleni iyasiza ekwakheni i-buffer oyilangazelela phakathi kwakho namaqiniso anzima okuphila.
Ingozi yezinhlanzi ukwethemba labo abafuna ukuzithathela imali yabo ngenkathi bematasa befihla umhlaba wangempela ezweni lokubukeka nokugwema izinto ezinjengezabelomali namabhalansi. Uyakholelwa kwizimpawu ze-zodiac Ucabanga ukuthi ngenxa yesibonakaliso sakho se-zodiac ungaceba uphumelele? Sazise esigabeni sokuphawula ngezansi!
Ingabe yisikhathi esibi samaPisces?
inhlanziAbomdabu bazojabulela ikhwalithiisikhathinezikhathi ezijabulisayo nabalingani babo unyaka wonke. Kodwa-ke, isikhathi esisukela ngoJanuwari kuze kube sekupheleni kuka-Ephreli sizoba sihle kakhulu empilweni yakho yomshado njengoba iNkosi yendlu uqobo izongena endlini yezinzuzo futhi ibhekise nasendlini yomshado.
Yamukela esinye isikhathi ohlangothini olungaqondakali lwe-Beast Zone. Lapho sibheka khona kumkhathi ukuze usitotose ngolwazi lwayo lwe-zodiac. Siyabona unemibuzo mayelana nobunye bobudlelwano bakho, othandekayo uBeast-Viewer, futhi namuhla kuzoba ukuxhumana kwakho nezinkanyezi.
Ubani ongamethemba ngempela? Ubani okufanele uhlale kude naye nezinye izimpawu zomgamu wezulu, noma kunzima kangakanani, ezingasoze zaba abangane bakho beqiniso. Hlala ubhekile futhi sizothola. Ngaphambi kokuthi i-cosmos inikeze impendulo oyifunayo, qiniseka ukuthi ushaya ukubhalisa bese ushaya inkinobho yesaziso ukuze ungaphuthelwa yimibhalo emisha, futhi ungakhohlwa ukuxhasa isiteshi sethu ngokubuka le ndatshana kuze kube sekupheleni.
Kodwa-ke, ungaba nesineke futhi ube nomunyu omncane uma uku-Taurus owaziwa ukuthi unesisisekelo esihle futhi wenza ikhal. I-Taurus yaziwa ukuthi ivame ukuqeda ubudlelwano lapho ingenampilo, futhi izobe ingahambisani nezinqumo zayo. Kuwe, amaCancer angaba nobungane obunzima.
Kepha uma kukhulunywa ngobungani bakho, iwele eliguquguqukayo kungenzeka kube umuntu ofuna ukumgwema. I-Taurus ithanda ukuphatha, futhi uphawu lwe-zodiac uGemini lwaziwe ngokushintsha umqondo walo njalo. Futhi Taurus othandekayo, njengoba sishilo ekuqaleni, cishe awusoze waba nesikhathi esihle ngophawu lwama-Aries.
GEMINI // AIR Gemini, ungumuntu othanda ukwazi! Uyashesha ukuqonda futhi unenhlalo ngokwedlulele futhi uyaxhumana. Uyaziwa ngokuhlala ukulungele ukuzijabulisa, kepha futhi ungathola ukuphumula endaweni okuyo ngokushesha okukhulu. Okuxakayo ukuthi kuzoba nzima kuwe uZeitge Virgo angashiyi lutho ngengozi futhi kaningi unamahloni kakhulu.
Isimo sokulondolozwa kweVirgo asihambelani nobuntu obuphumayo beGemini futhi kungenzeka sibalekele noma yisiphi isimo lapho iGemini ingachuma khona. Zombili lezi zimpawu zinobunzima bokuziveza ngakho-ke noma kunini lapho kuba khona ukungqubuzana noma ukulwa, asikho isibonakaliso esingahle sithathe isinyathelo sokuqala sokubuyisana. I-CANCER // AMANZI Umdlavuza Ungesinye sezimpawu ezithinta imizwa futhi esibucayi kakhulu se-zodiac.
ILeos yaziwa ngokuzicabangela okuncane, kepha (ngubani ongakusola, uyesabeka)! Uma kukhulunywa ngokwakha ubungane besikhathi eside, uLeos kwesinye isikhathi angalwela ukubamba iqhaza ngenxa yokuziqhenya kwabo. Ngizoqaphela lapho uxhumana nalabo abangaphansi kophawu lwe-Pisces zodiac. AmaPisces alawulwa yinto yamanzi kanti wena Leo uphethwe ngumlilo.
Amanzi nomlilo nje azihlangani, futhi umehluko wakho wobuntu uzokwanda. Ama-pisces awuhlobo lwesibonakaliso esingenzi lutho nolubucayi futhi ukuzwela kwakho kungenzeka kufinyelele ezingeni labo. IVIRGIN // EARTH Virgo, ungahle ube yisibonakaliso se-zodiac esisebenza kanzima ku-zodiac, futhi leyo yikhwalithi enhle kakhulu! Kepha kwesinye isikhathi kungenza kangcono Vele uzinike isikhathi sokudlala nobudlelwano bomuntu siqu! Imvamisa awuqondwa kahle yiVirgo ngoba ukuthola kunzima ukuveza imizwa yakho, kepha uma usuwenze umngani uba nomusa ngokweqile futhi uthembekile.
Uhlakaniphe kakhulu, Virgo othandekayo, okungaholela empikiswaneni yokuhlanzeka nobungane nabantu base-Aquarius nabo abavame ukuhlakanipha kakhulu. Akulona iphutha lakho iVirgo, abantu base-Aquarius abalangazelela isikhathi sokuba bodwa futhi abangaba nentukuthelo ngezinye izikhathi // I-AIR Ah, iLibra. Ohulumeni bamazwe.
Kubukeka sengathi ungazwana nawo wonke umuntu! Kepha akuhlali kunjalo. Libra, waziwa njengesinye sezimpawu zokubambisana nezinhle kunazo zonke kuzodiac, kepha awuyena umlandeli wesigameko. Igama elingukhiye, ufezela.
Uvame ukudala ngobuciko futhi ube ngumuntu, kepha uthanda ukuba yisikhungo sokunakwa kanye nempilo yephathi. Kunengqondo nje ukuthi kungenzeka ushayisane nesibonakaliso esifana ncamashi nawe, Leo. Bobabili bangabalingiswa abanamandla amakhulu futhi ngeshwa balukhuni ngokulinganayo.
Ukusikisela okuncane kwamaketanga nawe, Sagittarius, kuzoba sendleleni futhi. CAPRICORN // EARTH I-Capricorn uyizwi lezizathu, unesibopho, uyala futhi unekhono lokuzithiba. Uzimele ngokweqile futhi kwesinye isikhathi ukuthola kunzima ukwenza abangane.
Uthanda ukufunda kokuhlangenwe nakho, kepha kwesinye isikhathi ungathola njengokuncane ukwazi ukuthi labo abangaphansi kwesibonakaliso seLibra ngeke bakubekezelele. Nobabili nisezingeni eliphakeme ngokwedlulele, kepha iLibra ingumphakathi kakhulu futhi ingakuthinta futhi ibonakale iyisiphazamiso, iCapricorn. I-AQUARIUS // AIR Aquarius ungumuntu wokuqala futhi ulwa impi enhle.
Ungahle ungahambisani njalo namaPisces, noma. U-Aquarius onjengawe uzobathola bekhathazeke kakhulu, ngenkathi babuye bakuthole ubanda kancane. IZINHLANZI // AMANZI Pisces uyisibonakaliso sokudala nesobuciko! Umnene futhi uhambisana kakhulu nemizwa yakho.
Uyaziwa ukuthi unomusa kakhulu futhi empeleni awunabugovu. Zombili lezi zimfanelo ezinhle uma kukhulunywa ngokwenza abangane. Azikho izimpawu ezingeke zikwazi ukubhekana nazo, kepha amawele angaba kakhulu kuwe ngezinye izikhathi, ukuthambekela kokungakhululeki ngamawele amakhulu kunempilo futhi, lawo mawele azozama ukukwenza ongekho.
Futhi manje kubonakala sengathi yilokhu kuphela indawo yonke anakho kithina namuhla, mbukeli wesilo othandekayo. Sidinga isikhathi sokuphumula, kepha ngicela ubuye futhi ubuze izinkanyezi imibuzo evuthayo ngokuzayo. Ngabe le ndatshana ibuchaze kahle ubudlelwano bakho? Noma unaye umngane owephula konke okukulesi hlu? Yisiphi isibonakaliso esingumngani wakho omkhulu? Sazise kumazwana angezansi!
Ingabe u-Okthoba uyinyanga enhle yamaPisces?
2020Okthobaisibikezelo seinhlanziIzimali ze-zodiac zibikezela izikhathi ezizuzisayo zezimali. I-inyangakuvuna ukuqagela kanye nokutshalwa kwezimali. Kuzoba nezingqinamba zezimali futhi amathemba okukhula kwezezimali maningi.
Uma uyingane kaJuni uthanda ukujabulisa abanye abantu uma ufuna into efana neyomunye umuntu, uma kungenzeka uphume ushiye abanye, uma wazalwa ngoJulayi amathuba okuthi uhlale ugcwele amandla uma uyi ndoda kumnandi ukuzihlalela nabangane bakho ukubona ubuntu bakho obuvutha bhe futhi ubenze bachithe isikhathi nawe unawo lawo mandla enza abantu basondele basho okuthile kuwe, kuthatha umzuzwana nje ukubuya nokuhlekisa Ukubuyela emuva izingane zika-Agasti begcwele amahlaya bathanda ukuhleka futhi bayathanda ukuhlekisa abanye abantu basebenzisa le nkakha yamahlaya ukwenza i-ersonable Uma wazalwa ngo-Agasti Cishe ungumholi wemvelo yokuzalwa u-Agasti izingane zisebenzisa lamakhono obuholi ukuze zombili zibe sebhizinisini September September babies bathambekele kakhulu emininingwaneni uma bezalwa ngoSepthemba Kungenzeka ukuthi ungumuntu ofuna ukupheleliswa Njalo kufanele ube nakho konke okuphelele futhi ulindele ukuthi kubantu abasebhizinisini kanye nasempilweni yakho yangasese Septhemba izingane zine-hig kakhulu h okulindelwe ukuhleleka nemininingwane futhi uma othile esilela, uSepthemba uzogxekwa ngokushesha okukhulu ngo-Okthoba Okthoba izingane zilula kakhulu futhi azinankinga, zizimele ngokweqile, lapho zizalwa ngoSepthemba uvame ukubheka ohlangothini oluqhakazile, uma ukwazi ' Ngibona uhlangothi olukhanyayo zisuka nje, lapho-ke kufanele uzame ukuthola abantu abaningi, labo abazalwa ngo-Okthoba bagcwele ubuhle futhi bamnandi nomaphi lapho beya khona ngoba izingane zika-Okthoba zimnandi futhi ziyakhuluma, kwenza kube lula ngabo ukwenza abangane ngoNovemba, uma uzalwa ngoNovemba kukhona lezo Zinto Inyanga Yakho Yokuzalwa Engakutshela Ngawe NgoNovemba izingane zivame ukuba nenkani kakhulu futhi zisithe kakhulu lapho ingane kaNovemba igxile impela Ibihle Ithuba Lokukhulu Uma wazalwa ngoNovemba uyi kungenzeka ukuthi izingane zikaNovemba ezinobuhlakani futhi ezizikhuthazayo kwesinye isikhathi azifuni usizo ephutheni lothile, noma ngabe othile enikeza usizo enganeni kaNovemba cishe ngeke baluthathe. Laba bantu abajabuli Ngaphandle kokuthi bangenza okuthile bebodwa Uma ngabe wazalwa ngoNovemba ungakhula, kepha kuphela uma ufuna ukuba nguDisemba Izingane ziba mnandi futhi zithanda ukuba yisikhungo sokunakwa lapho zisendaweni igumbi eligcwele abantu Konke ukunakwa kudinga ukunakekelwa kubo uma wazalwa ngoDisemba kungenzeka ukuthi ukhuthele kakhulu endlini ubuka umabonakude okungeyona inkomishi yakho yetiye Disemba izingane ziyaziqhenya kakhulu futhi azifuni babanjwa yinoma yini lapho bevinjelwe okuthile, abanankinga nokuzivikela r ibe usazise esigabeni sokuphawula ngezansi bese ubhalisela ukuthola okuningi kwakho
Yiziphi izinsuku amaPisces?
inhlanzi (Februwari 19 - Mashi 20)
AmaPisces, uphawu lwamanzi, yiqoqo lezinkanyezi lokugcina le-zodiac.
Luyini uphawu lwe-Zodiac September?
Ababiliizimpawu zomgamu wezuluehlotshaniswa nenyanga ye-SepthembayiVirgo neLibra. Abantu abazalwa kusukaSepthemba1 kuya kuSepthembaAbangu-22 bangamalungu eVirgouphawu. Njengomunye weZodiac'sukuqonda kakhulu nokunakekelaizimpawu, iVirgo ingabonakala kalula ngozwelo lwabo lwangaphakathi.
Ngubani uPisces soulmate?
Ngubani uPisces Soulmate? Njengoba iPisces iyaphupha, inothando, futhi ifuna ukuthula, bazothola ukuqedelwa ku-soulmate neIzinkanyezi zeTaurus. I-Taurus ingaba umlingani wezothando wePisces. I-Taurus iyasebenza, iyathandana, inothando, futhi ingaba umngani omkhulu kumaPisces.amashumi amabili. 2020.
Ngabe uPisces wake waluthola uthando lweqiniso?
Kuzo zonke izimpawu eziku-zodiac,inhlanziukunxanelauthando, ezothando, nokuxhumeka okujulile kunanoma yikuphi okunye. Ngobainhlanzi, ukupholacansuka ku-zero uye ku-60 ngokushesha okukhulu; ngeke benze umzamo omkhulu ngokuthandana ngaphandle kokuthi babone ukuthi aeyiqinisoubudlelwano obugcwele uthando nokusondelana busemgqeni.26. 2016.
Buyini ubuthakathaka bePisces?
Amandla: Unesihe, ubuciko, enembile, enomusa, ehlakaniphile, yomculo.Ubuthakathaka: Ukwesaba izinto eziningi, futhi ukuhlanekezela, isimo sengqondo, ukubalekela umhlaba wangempela, kuvame ukuba yisisulu.inhlanziukungathandi: Ukugxekwa, ukungakwazi ukususa okwedlule, udlame, isimilo esinonya.
Yini uPisces ohlangothini olumnyama?
Azinayo intando eqinile futhi zingashintshwa kalula. Ngenxa yenzondo yabo yokubhekana ngeziqu zamehlo, bavame ukuhlala ocingweni ngezinkinga ezithile, kubashiye besengozini yezimpawu ezingekho emthethweni.inhlanzifuthi ilimala kalula lapho ibhekene nokugxekwa okuningi, futhi ihoxe esikhundleni sokuzimela.16. 2020.